Meizu 16s: astaamaha, naqshadeynta iyo qiimaha android-ka cusub ee rakhiis ah | Androidsis
Meizu 16s horeyba waa run. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta oo dhan
Maaha markii ugu horeysay ee aan kaala hadalno meizu 16s, calanka la filayo ee shirkadda Aasiya oo muujin doonta si aad uga waranto qaybta sawirada ee weyn. Sugitaanku muddo dheer buu ahaa, laakiin waxaan ugu dambayntii xaqiijin karnaa dhammaan faahfaahinta naqshadeynta iyo astaamaha taleefankaan sare ee dhammaadka sare ee Android ku fadhiya qiimo jabis. Iyo, shir jaraa'id, shirkadda fadhigeedu yahay Shenzhen waxay si rasmi ah u soo bandhigtay taleefankan.
Waxaan ka hadleynaa qaab muuqaal leh oo leh shaashad 6.2-inji ah, marka lagu daro saamiga shaashadda ee gaaraya 91 boqolkiiba iyadoo ay ugu wacan tahay haysashada looxyada hore ee ugu yar. Oo iska jir, ma jiro raad sumcad si aan u jabin sharraxaadda ee Meizu 16s shaashadda. Aynu aragno inta ka hartay faahfaahinta farsamo ee tusaalahan xiisaha leh ee ku imaan doona qiime aad u soo jiidasho leh.
Naqshadeynta iyo astaamaha Meizu 16s kadib soo bandhigideeda rasmiga ah
Sidii aan dhihi jirnay, waxaan ka hadlaynaa a qalab premium. Sidan oo kale, jirka Meizu 16s wuxuu ka kooban yahay qalab sharaf leh si loo bixiyo dhammeystir tayo leh iyo dareen weyn oo gacanta ku jira. Iyo xaqiiqda ah inay dhererkeedu yahay 7.6 mm oo keliya oo miisaankeedu yahay 165 garaam, ka dhig tusaalahan terminal aad u fudud. Oo iska jir, Meizu 16s waa qalab runtii wata qalab tartan leh.
Si aan u bilawno, waxaan helnaa shaashad ay sameysay guddi Super AMOLED ah oo leh 6.2-inch dadban oo gaara qaraar dhan HD +. Tan, waa inaan ku darnaa processor Qualcomm Snapdragon 855 oo ay weheliso Adreno 640 GPU iyo laba nooc oo leh 6 ama 8 GB oo RAM ah oo lagu bixinayo waxqabad aan lala tartami karin. Iyo haa, waxaan sidoo kale yeelan doonnaa laba nooc oo leh 128 iyo 256 GB oo keyd gudaha ah, qaabeyn in ka badan qancineysa baahiyaha isticmaale kasta.
Taleefanka, kaas oo la yimaada Android 9 Pie Gacanta hoosteeda, waxay leedahay laba kamaradood oo nidaam ah oo ka kooban 48 megapixel double sensor oo ay saxeexday Sony (laba IMX 586 iyo IMX 350 dareemayaal) si loogu bixiyo qayb sawir sare leh. Qayb ahaan waxaan ugu mahadnaqayaa nidaamkeeda xasilinta muuqaalka, muuqaalka habeenkii iyo kamaradda hore ee 20 megapixel oo leh aqoonsi wajiga iyo qaabka HDR +.
Ku saabsan taariikhda bilaabista iyo Meizu 16s qiimaha, Dhammaan noocyadu waxay gaari doonaan suuqa Aasiya 28-ka Abriil qiimaha 3198 yuan, qiyaastii 430 euro si loogu beddelo moodeelka oo leh 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah oo gudaha ah, 3498 yuan, oo ku saabsan 490 euro si loo beddelo, tusaalaha oo leh 8 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo ah xusuusta gudaha, ama 3998 yuan (qiyaastii 550 euro in la beddelo) nooca fiitamiin ka badan oo leh 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Meizu » Meizu 16s horeyba waa run. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta oo dhan
Realme waxay ku tumaneysaa ciida Shiinaha: mar dhow ayey balaarin doontaa aragtiyaheeda xitaa inbadan